Jooji ka dhuumashada macaamiishaada
Isniintii, September 13, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Michael Reynolds
Weli waa ila yaaban tahay imisa shirkadood ayaa ka qariya macaamiishooda. Waxaan usbuucii la soo dhaafay ku sameynayay cilmi baaris ku saabsan barnaamijka kobcinta iPhone-ka maxaa yeelay waxaan haystaa macmiil u baahan barnaamijka iPhone-ka. Dadka qaar ayaan weydiiyay barta Twitter-ka. Douglas Karr wuxuu i siiyay tixraacyo qaar waxaan sidoo kale ogaa hal gudbin oo wadahadal hore aan la yeeshay saaxiib kale. Waxaan aaday boggaga internetka ee seddex shirkadood oo kala duwan isla markiiba waan niyad jabay.
Shirkad kastaa waxay lahayd ugu yaraan bog internet laakiin dhammaantood waxay ahaayeen kuwo aan caddayn, aan badnayn, caajis ah, ama dhammaan waxyaabaha kor ku xusan. Xitaa si cad uma aysan oran “waxaan sameynaa barnaamijyada iPhone-ka” mana aysan soo bandhigin wax shaqo hore ah ama shaashado shaashad ah.
Way kasii dartay markii aan aaday boggooda xiriirka. Ma aanan arkin hal lambar taleefan, cinwaan, ama mararka qaarkood xitaa cinwaan emayl. Badankood waxay heleen foomka xiriirka fudud.
In kasta oo aan buuxiyay foomamka xiriirka, haddana waxaan yara dareemay walaac. Shirkadahaasi sharci ma ahaayeen? Miyaan ku aamini karaa iyaga lacagta macmiilkayga? Shaqo fiican ma qaban lahaayeen? Macaamilkeygu wuxuu rabaa qof deegaanka ah - xitaa miyey ku yaalliin Indianapolis?
Macaamilkeygu waa shirkad malaayiin doolar soo saarta waxaanan u baahanahay inaan u diro qof kalsooni qaba. Ilaa hadda ma aanan hubin haddii aan helay shirkad sax ah.
Kadib, waxaan ka helay tixraac kale barta Twitter-ka Paula Henry. Waxay ii gudbisay shirkad. Markii aan tagay bogga shirkadda, waa la i iibiyay. Waa tan sababta:
Waxay lahaayeen a degel qurux badan taasi waxay ka dhigeysaa inay u egyihiin shirkad dhab ah
Waxay soo bandhigeen xaqiiqo ahaan shaashado shaashad shaqo hore
Waxay si cad u sheeg waxay qabtaan: “Waxaan horumarinnaa barnaamijyada iPhone”
Waxay yihiin firfircoon on Twitter oo ay ku muujiyaan sheekadooda Twitter-ka websaydhka (waan ka heli karaa inay la hadlaan)
Boggooda xiriirka waxay leeyihiin cinwaan emayl, cinwaan jidheed, iyo lambarka taleefanka
Marka la soo koobo, shirkaddu waxay ii fududaysay aniga inaan ku kalsoonaado. Waan wacay oo waxaan ka tagay fariin cod ah waxaana hal saac gudahood dib iigu soo wacay. Waxaan weydiiyay xoogaa su'aalo ah waxaanan waxbadan ka bartay shaqadooda hore. Hadda waxaan la shaqeynayaa iyaga si aan ugu horumariyo barnaamijka iPhone-ka macmiilkayga.
Sawirka aad ku soo bandhigto khadka tooska ah, fariinta aad la xiriirto, iyo sahlanaanta inaad kula xiriirto waxay wax weyn ka bedelayaan macaamiishaada. Samee naftaada mid fudud oo ganacsi lala sameyn karo.
Tags: kala soo xiriirlambarka lagala xiriirayopage xiriirqarintaPaula henry